Umphetho ochanekileyo ngeenwele ezinde
Iinyanga ezidlulileyo zokugqibela kwizinto zobugcisa beebhokhwe zinikezwa ngokukhethekileyo kwimida emide, ehlambulukileyo. Oku kunika umfanekiso ophezulu kwendalo kunye nokuthandana, ukutsha kwentsha. Kuze kube yimhla, iqhosha eliluncedo neenwele ezinde libhekwa njengento ephuthumayo kunye neyonke i-hairdo ehambelana naluphi na ubudala kunye nesitayela.
Isikwere esibekwe kunye neengqungquthela ezichanekileyo
Kukho iindlela ezintathu zokwenza le nywele:
sikwere esingenamlinganiselo ;
i-kare-sultan (imida phambi kwexesha elingasemva).
Umphetho ochanekileyo ufanelekile kuphela uhlobo lokuqala lwebhantshi, kuba ezinye ezimbini zimele zibe oblique okanye akunjalo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba iklasi eliqhelekileyo eliqhelekileyo lisikisela iinwele ngokuthe ngqo. Ngoko ke, ama-bangs kufuneka abekwe nge-ironing. Kule meko, ubude balo bufanele kufinyelele kumgca ophezulu wokukhula kweelishi.
Ukuhlaselwa ngeengqungquthela ezichanekileyo
Le nwele yeenwele isinika i-volume volume and airiness. Ukubeka ibhondi kufuneka kudibanise le ndlela. Abakhandi bee-Hairdressers bayacetyiswa ukuba bayinqumle le nkcukacha yekhanda elincinci, kwaye ngexesha lokunyuka kweenwele, liphakamise, lihlukanise ibe ngamacu ahlukeneyo. Kufanelekile ukukhumbula ukuba i-cascade ayinamandla kakhulu kunye ne-fluffy bangs, ukwenzela ukuba ungayithandi imbopheleleko ye-haircut.
Spit nge-bangs ngqo
Njengomthetho, nayiphi na indlela eyahlula ngayo inwele ayifaki ukuba khona kwe-bang, kuba ibalaseleyo, kwaye nangemvelaphi yayo i-hairdress ilahlekelwa ngumphumo wayo.
Okukuphela kweyona nto idibanisa i-braids efanelekileyo kunye nomtya okanye ibhande. Kule meko, iibhande ezinqamle, ezide zide, zifihla kancane iinki, zifezekile. Kubalulekile ukuba ubeke umgca oqinileyo ngaphandle kokugqithiswa kwezinto kwaye wayephelile. I-Ribbon okanye ibhande lezinwele kufuneka lifakwe kwisiseko se-bangs.
Ukuzisa iinwele ezimnyama
Mask for tips on dry hair
Umququzeleli wokukhula kweenwele - ukulinganiswa kweemveliso ezigqityiweyo kunye nokupheka ekhaya
Iimbobo zeenwele kunye ne-bandage
I-Anesthesia yokukhutshwa kweenwele
Ukutshatyalaliswa kommandla osondeleyo
Ndiyakwenza idayi zam inwele ngexesha lokukhulelwa?
I-oil tree yeenwele
I-Grushanka - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
I-Neurodermatitis - iimpawu kunye nokonyango
I-PVC yokugubungela isiseko somgangatho webala
Ukukhulelwa kobuxoki kwizinja - iimpawu
Ngaba iDiCaprio ngumhlaza?
U-Natalia Vodyanova ukhulelwe okwesihlanu!
Biography kaDaniel Radcliffe
Ukunyangwa kokukhupha komzimba kubantu abadala - iziyobisi
Ezili-15 ezincinci iinkcukacha malunga nokuncelisa
Iipeptides zokulahleka kwesisindo
Yintoni enokuyondla i-kitten-eyred kitten?
Uthabathela emlenzeni opheleleyo
Isaladi kunye nomsila kunye neqanda
I-aicic dermatitis kubantwana
I-gooseberry sauce ebusika - zokupheka